Lahatsary: ​​ny iPhone 5 sy iPhone 5 amin'ny volamena, mifanatrika | Vaovao IPhone
Pablo Ortega | | iPhone 5, iPhone 5s, Fantson'ny IPhone
El iPhone 5s loko volamena Efa nanjary tombony ho an'ireo mpankafy Apple any amin'ny firenena toa an'i Etazonia, izay amidy an-tserasera ny telefaona ary sarotra be ny mahita singa misy amin'ny magazay ara-batana. Eny, efa nanao izany indray isika iPhone 5s volamena mampitaha azy, mifanatrika, miaraka amin'ny iPhone 5 fotsy. Amin'ity horonantsary nataonay ity dia azonao atao ny mahita, amin'ny karazana antsipiriany, ny fanavaozana ny fanovana bokotra an-trano, izay mampiditra ny sensor ID Touch vaovao hahafantarana ny dian-tananay ary hahafahana mamoha ny terminal.
Ao amin'ny horonan-tsary koa asehonay anao ny Tselatra LED iPhone 5s roa manoloana ny tselatra an'ny iPhone 5 sy ny ambany, ny lafiny ary ny tampon'ireo fitaovana, mifanila. Marihina fa ny loko volamena amin'ny iPhone 5s dia tena torana, noho izany, arakaraka ny tarehin-jiro amin'ny toerana misy anao dia afaka manome ilay fahatsapana fa maodely fotsy sy volafotsy izy io. Ny fahasamihafana amin'ny loko dia azo jerena, ambonin'izany rehetra izany, eo amin'ny sisin'ny iPhone ary kely kokoa amin'ny lamosina aluminium.
Amin'ny sehatra manokana, mieritreritra aho fa fanavaozana ny bokotra trano amin'ny maodely fotsy sy volamena an'ny iPhone 5s dia miavaka tsara izy. Na izany aza, ao amin'ny maodely volondavenona fotsy dia zara raha hitanao ny sisin-doko miloko manodidina ny bokotra tokana, noho izany dia mihena kely kokoa.
Amin'ity herinandro ity ihany dia hasehontsika anao amin'ny iPhone News ny horonan-tsary vaovao izay hanasongadananay ny endrik'ilay modely volondavenona vaovao, ary hapetrantsika mifanatrika, eo akaikin'ny iPhone 5s miloko volamena ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 5 » Lahatsary: ​​ny iPhone 5 sy ny iPhone 5 amin'ny volamena, mifanatrika
Ny mainty misy volondavenona dia loko tsara tarehy sy kanto indrindra amin'ny 3. Ny volamena dia ho an'ny choni na vehivavy mangatsiatsiaka izay mieritreritra ny hitondra volamena sy volafotsy dia mitovy amin'ny 5. Ankoatry ny mainty hoditra dia mieritreritra aho fa kely kokoa sy vitsy manelingelina rehefa mijery atiny multimedia sy ny efijery dia toa lehibe kokoa koa. Ny tsy fitovizan'ny volondavenona vaovao sy ny lamba mainty dia SPECTACULAR! Miverina mijery toa ny iPhone 4 / 4s (endrika mahavariana indrindra).
Malahelo, nianjera avy tany an-danitra ianao, nilatsaka ho mpikatroka ché.
Ary ny peratra volafotsy na volamena dia aleoko fa toa mainty izy io ary toa toa mainty kokoa koa ny efijery rehetra. Ny tsy tiako dia ny sisin'ny vy manodidina ny fakantsary sy ny flash sensor dia nesorina, nomen'izy ireo azy ny famaranana.
Inona no tsara kokoa, ny vehivavy no tsara indrindra amin'ny zanak'olombelona
heh, inona no tiany holazaina?
Ny marina dia raha nanapa-kevitra ny hividy ny iPhone 5 aho dia tsy fantatro izay maodely ho safidiko, na ho an'ny volondavenona na volamena. Amin'ny lafiny iray dia mainty daholo ny iPhones ahy, loko marevaka izy io ary manome ny fahatsapana efijery lehibe kokoa. Na izany aza, tena tiako ilay loko volamena vaovao, tena akaiky ny fotsy izy io.
Amin'ny farany, eo anelanelan'ny zavatra iray sy ny iray hafa, hitako fa hiafara miandry ny iPhone 6 aho.
ny findaiko rehetra. Misalasala aho fa miandry 6 ianao, aleo manamboatra boaty, mangidihidy ny poketrao, anaka.
Avy amin'izay hitako fa naneho ny diso tamin'ny tenako dia nolazaiko avokoa ny iPhone-ko ary 2 fotsiny no misy ahy, 3G iray ary ny iPhone 4 misy ahy ankehitriny (samy mainty no navoakan'ny fifanarahana). Tsia, tsy mangidihidy ny kitapoko ...
tsenan'ny dia hoy izy:
inona ny anaran'ilay hira any ambadika